बिनाको प्रेमी बारे भयो यस्तो खुलासा, बिना कता गा,यब भइन ? २ प्रेमिका बनाउने प्रबेश किन चुप ? भिडियो हेरौ – Classic Khabar
छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने आशामा चिना हेराउन पनि धेरै ठाउँ चहारे। नवलपुरबाट काठमाडौं, भक्तपुरका थाहा पाएसम्म सबैकोमा पुगिसके। गैंडाकोटमा हेराउने भन्नेकहाँ पुगिन्। हेराउनेले सोमबारसम्म घर फर्किने बताएपछि उनी त्यसको भरमा परेकी थिइन् । तर, सोमबारसम्म केही पत्ता नलागेपछि उनी झन् चि,न्तित बनेकी छन् । बिनाको बिषयमा पुन्य गौतमले पनि बोलेका छन । चाडै आउ बिना नानु भनेर,बाकी भिडियो हेरौ
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २६ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल